पोखराका पौडेलको पनि विमान दुर्घटनामा ज्यान गयो, एमबिबीएस सकेर फर्केका थिए – My Blog
Home समाचार पोखराका पौडेलको पनि विमान दुर्घटनामा ज्यान गयो, एमबिबीएस सकेर फर्केका थिए
पोखराका पौडेलको पनि विमान दुर्घटनामा ज्यान गयो, एमबिबीएस सकेर फर्केका थिए
starnews - Mar 13, 20180052
पोखरा, २९ फागुन / पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ६ जरेवरका दामोदर पौडेल बंगलादेशबाट फर्किएका आफ्ना छोरा लिन काठमाण्डौ पुगेका थिए । पौडेल २ बजे ल्याण्ड हुने उनका छोरा सञ्जय चढेको विमानकै पखाईमा थिए । तर उनले छोरालाई हाँसीखुशी स्वागत गर्न पाएनन् ।
सोमबार काठमाडौमा भएको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा सञ्जय पनि परे । ४९ जनाको मृत्यु भएकोमा ३३ नेपाली चढेकोमा २२ जना नेपालीको मृत्यु भयो भने ११ नेपाली घाईते छन् ।
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुदाँ बंगलादेशस्थित जलालावाद राजीव राबिया मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलमा एमविविएस सकेर नेपाल फर्किदै गरेका पौडेलको मृत्यु भएको हो । दामोदर पौडलले पोखराको लेकसाइडमा व्यावसाय गर्दै आएका छन् ।
सञ्जय एक मात्र छोरा हुन् । माछापुच्छे गाउँपालिका ६ धिताल घर भएका दामोदर उनका दुई भाई सहित पोखरामा लामो समय देखि व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सञ्जय पोखराका मदरल्याण्ड माविबाट एसएलसि पास गरेका थिए भने सगरमाथा मा विमा साइन्स पढेका थिए ।
सबै पढाई पूरा गरेर अगाडि डा. थपेर आएका सञ्जय आफ्नो भूमि टेक्न नपाउँदै परलोक भए । उनको मृत्युले गाउँबासी, आफन्त शोकमा छन् ।
Previous Postपत्रकार सम्मेलनमा डाक्टरको आयो यस्तो बयान ! विमान दुर्घटनापछि आगलागी हुँदा नराम्ररी जलेका शव पहिचान गर्नै नसकिने अवस्थामा रहेकाले पोस्टमार्टमा जटिलता (भिडियोसहित)
Next Postबिमान खसेको देख्नेहरु भन्छन्, अझै ठुलो क्षेती हुन् सक्थ्यो ! बिमानस्थलमा ज्यान बचाउन यसरी भयो भागाभाग ! (भिडियो)
नेदरल्याण्डको आठौ विकेट पतन, सोमपाल बने नायक ! यस्तो छ ताजा नतिजा ..